Ọkachamara na-eme ka ị nweta akwụkwọ akaebe ọhụụ
Forklift - Nbanye ụgbọ oloko
Na-arụ ọrụ na millimeter
Na-agba ụkwụ na nkedo
Ị mụta otu esi eme ka ọ dị elu wee rute ụgbọala n'ụzọ ziri ezi. Ị na-arụ ọrụ nkedo na ibudata, usoro ịkwọ ụgbọala, na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu, na-adọba ma na-ekpuchi ibu dị elu na obere obosara ala. Ị mụtara ịkwọ ụgbọala na-ahụ maka ọrụ dị mma, ị na-amụta ịrụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi ma rụọ ọrụ na igwe. Anyị na-akụziri gị otú ị ga-esi rụọ ọrụ na obere obere ụgbọala na-arụ ọrụ ma rute ụgbọala. Na onye were gị n'ọrụ, ị na - arụ ọrụ na ígwè ọrụ ka ukwuu.
Ọ bụrụ na ị gafere usoro ihe omume ahụ, anyị ga-enye gị akwụkwọ onye na-akwọ ụgbọala (ma ọ bụ / na ruo na ọkwọ ụgbọ ala). Ndị ọrụ ụlọ ọrụ Antwerp nabatara akwụkwọ a ma bụrụ ezigbo ihe onwunwe mgbe ị na-etinye akwụkwọ.
Ngwá ụkwụ na-enye ọzụzụ - Nrịta aka na-ebu na nkezi abụọ ruo afọ ise.
Ị na-amalite na moda adder.
Maka Heftruck - ọzụzụ mmemme ị na-enweghị iji nweta ihe ọmụma ọ bụla nwere ike ịchọta.
Ọ dị mkpa na ị nwere oke ọrụ zuru oke ma nwee ahụike. Dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala nke ụlọ ọrụ mmepụta ngwá ọrụ ọ bụla, ị bụ ụtụ ahịa maka ụlọ ọrụ ahụ. N'iburu ibu ọrụ, nkwụsi ike dị mkpa
Ị nọ n'ime ụlọ ọrụ nke na-arụ ọrụ ngwongwo. Ị nwere ike iji ya mee ihe. Belgium na-abawanye na nchịkọta ngwa ngwa. Port nke Antwerp na-aga n'ihu na-etolite ma bụrụ onye ọrụ dị mkpa. Ya mere, na nkuzi a, ị nwere nnukwu ohere ịchọta ọrụ.
Kedu ihe ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị?
Mgbe ọzụzụ nkuzi na mgbatị, ị ka nwere ike ịkwalite ebe ọzọ dịka ọkwọ ụgbọ ala na ụzọ ndị ọzọ niile si agafe.